May 7, 2020 - Lupyo News
May 7, 2020 by Lupyo News
ထိုင်းရောက်ရွှေမြန်မာတွေထဲက အမျိုးသမီး(၃)ဦးသေဆုံး ထိုင်းရောက်ငါတို့မြန်မာတွေရဲ့ဘဝမရှိ ရှိတဲ့အလုပ်လေး ရှာကြံလုပ်တာ အသက်ပါပေးလိုက်ရတယ် ထိုင်းနိုင်ငံချွန်ဘူရီမှာ မေလ ၇ ရက်နေ့၁၂:၂၀ ချိန် ဂိုဒေါင်အမိုးတက်မိုးတဲ့ ၆ ယောက်ထဲက အမျိုးသမီး ၃ ဦး ပေ ၅၀ အမြင့်က ရုတ်တရက်ချော်ကျပြီး အောက်ကြမ်းပြင်နှင့်ရိုက်မိကာ အသီးသီး ပွဲချင်းပီးသေဆုံးသွားတယ် သေဆုံးသွားသူ ၃ ဦးဟာ သက် ၃၆ ၊ ၄၀ ၊ ၄၆ အရွယ် အမျိုးသမီးများဖြဟ်သည်ဟုသိရ ။ Photo Crd #SiThuMaung ————————- unicode ထိုငျးရောကျရှမွေနျမာတှထေဲက အမြိုးသမီး(၃)ဦးသဆေုံး ထိုငျးရောကျငါတို့မွနျမာတှရေဲ့ဘဝမရှိ ရှိတဲ့အလုပျလေး ရှာကွံလုပျတာ အသကျပါပေးလိုကျရတယျ ထိုငျးနိုငျငံခြှနျဘူရီမှာ မလေ ၇ ရကျနေ့၁၂:၂၀ ခြိနျ ဂိုဒေါငျအမိုးတကျမိုးတဲ့ ၆ ယောကျထဲက … Read more
ကိုယ့်ကို မပတ်သတ်ချင်တဲ့ သူကိုသွားမပတ်သတ်နဲ့
ကိုယ့်ကို မပတ်သတ်ချင်တဲ့ သူကိုသွားမပတ်သတ်နဲ့ ကိုယ့်ကို မပတ်သတ်ချင်တဲ့ သူကိုသွားမပတ်သတ်နဲ့ ကိုယ့်ကို မဆက်သွယ်ချင်တဲ့ သူကိုသွားမဆက်သွယ်နဲ့..၊ ကိုယ့်ကို မခေါ်ချင်တဲ့သူကို အတင်းလိုက်မခေါ်နဲ့ ကိုယ့်ကြောင့်သူ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပါ ထိခိုက်နေလိမ့်မယ်..။ သူနေသလို ကိုယ်နေနိုင်အောင်ကြိုးစား သူတောင်နေနိုင်တာဘဲ အဲ့ဒါကိုကိုယ်က မနေနိုင်မထိုင်နိုင်လိုက်ဖြစ်နေရင်..၊ ဒီလူ ငါဒီလိုလုပ်လည်းရပါတယ်ဆိုပြီးပိုနိုင်စားလာလိမ့်မယ် ကိုယ့်အပေါ် တကယ်စိတ်ရင်းရှိတဲ့လူ..၊ ကိုယ့်ကို လိုအပ်တဲ့သူဆိုရင် ကိုယ်က သူ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်စိတ်ပျက်နေတယ်..။ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပြီဆိုတာသိရင်သူလုပ်နေတာ မှားမမှားဆင်ခြင်ပြီးကိုယ့်ဆီပြန်လာမှာပေါ့..၊ အကယ်၍ အဲ့လိုမှ ပြန်မလာဖူးဆိုရင်ကိုယ်က သူ့အတွက်ဘာမှအရေးမပါလို့ဘဲပေါ့..၊ အဲ့လိုဘဲ လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကိုအဲ့လူကိုယ့်ဘေးနားမှာ မရှိတော့မှ သိကြတယ်..၊ တချို့တွေကြတော့လည်း တန်ဖိုးနားမလည်တဲ့အပြင် အမြဲကိုယ်မှန်တယ်ထင်ပြီးတယူသန် အတ္တကြီးတတ်ကြတယ်..။ အဲ့လိုနဲ့ဘဲ မဆုံးရှုံးသင့်တဲ့ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတဲ့သူ တစ်ချို့ကိုအဆုံးရှုံးခံကြရတယ်..။ အဲ့လိုခံစားချက်တွေက ချစ်သူရည်းစားမှမဟုတ်ဘူးစိတ်ခံစားလွယ်တဲ့ လူတိုင်းရဲ့..၊ နေ့စဉ် လူမှုရေးနယ်ပယ်နဲ့အသိုင်းဝိုင်းတွေထဲမှာလည်း ဖြစ်တယ်..။ တောသားရဟန်း ———————— Unicode ကိုယျ့ကို … Read more
ဆုံးဖြတ်ချက် တွေဝေတတ်တဲ့ အကျင့်ကိုပြင်နိုင်ဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ နည်းလမ်းလေးများ
ဆုံးဖြတ်ချက် တွေဝေတတ်တဲ့ အကျင့်ကိုပြင်နိုင်ဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ ဆုံးဖြတ်ချက် ပြတ်သားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ တကယ်တမ်းမှာ ထင်တာထက် ပိုခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဟာ မှန်ပါ့မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်က လူတိုင်းခံစားမိတတ်ကြတဲ့အရာပါ။ ဒါပေမယ့်လို့ အရာရာမှာ တွေဝေနေမယ့်အစား ရဲဝံ့စွာ ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့ သူတွေကမှ ဘဝရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ခံစားကြရသူတွေပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားတဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ဒီအချက်လေးတွေက ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ တရားထိုင်ပါ … တရားထိုင်ခြင်းက စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ တရားထိုင်တဲ့သူတွေဟာ စိတ်စွမ်းအားမြှင့်မားပြီးတော့ အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ စိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အမှားအမှန်ကိုလည်း ကောင်းကောင်းဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ တရားထိုင်ခြင်းက အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ယူပါ … အတွေ့အကြုံတွေနည်းတဲ့အခါ အမှားတွေကို ထပ်တလဲလဲလုပ်မိတာကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာလည်း မပြတ်သားနိုင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်မသိတာတွေကို … Read more
ကျွန်မ နေနိုင်နေပါပြီ အရင်လို ဖုန်းမဆက်လို့လဲ သိပ်ပြီး ဝမ်းမနည်းတော့ဘူး
ကျွန်မ နေနိုင်နေပါပြီ အရင်လို ဖုန်းမဆက်လို့လဲ သိပ်ပြီး ဝမ်းမနည်းတော့ဘူး ကျွန်မ နေနိုင်နေပါပြီ အရင်လို ဖုန်းမဆက်လို့လဲ သိပ်ပြီး ဝမ်းမနည်းတော့ဘူး မအားတာပဲ နေမှာပါလို့လဲ ဖြည့်မတွေးဖြစ်တော့ဘူး..။ သတိရတဲ့အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆက်ချင်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် ဆက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာလောက်ပဲ တွေးဖြစ်တော့တယ် အရင်လို ဖုန်းဘေးနား ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး မျှော်မနေတော့ဘူး..။ ကျွန်မ ရင့်ကျက်စပြုလာပါပြီ . . . အရင်လိုခဏခဏ မတမ်းတဖြစ်တော့ဘူး တစ်ခုခုဖြစ်တိုင်း တိုက်ဆိုင်တိုင်း ကိုယ့်ဘက်ကသာ အမောတကောနဲ့ သတိတွေရလိုက်ရတာ..၊ သူ့ကတော့ ဘာကိုမှ မှတ်မှတ်ရရမရှိဘူး ခုကျွန်မလဲ ဒီလိုပါပဲ အမှတ်တရတွေ ရှိလာရင်တောင် အမှတ်တမဲ့လေး နေနိုင်လာတဲ့အထိ ကျွန်မ ရင့်ကျက်နေပါပြီ..။ ကျွန်မ အဆင်ပြေနေပါပြီ . . . အရင်လို အများကြီး မမျှော်လင့်ဖြစ်တော့ဘူး … Read more
တစ်နိုင်ငံလုံးမျှော်လင့်နေကြတဲ့ ရွှေမိုးကြီးလာတော့မည်။ တစ်နိုင်ငံလုံး မိုးရွာသွန်းမယ့်နေ့ရက်များ
တစ်နိုင်ငံလုံးမျှော်လင့်နေကြတဲ့ ရွှေမိုးကြီးလာတော့မည်။ တစ်နိုင်ငံလုံး မိုးရွာသွန်းမယ့်နေ့ရက်များ။ အားလုံးမျှော်လင့်နေကြတဲ့ ရွှေမိုးကြီးလာတော့မည်။ တစ်နိုင်ငံလုံး မိုးရွာသွန်းမယ့်နေ့ရက်များ။ တောင်ဆီမှာမှောင်ရီပြာ မိုးရိပ်တွေဆင်… #MME ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ Update မြန်မာမိုးအခြေအနေကတော့ မေလ ၈ရက်နေ့မှ ၁၄ရက်နေ့အတွင်း ချင်းပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မြောက်ပိုင်း ကယားပြည်နယ် ပဲခူးတိုင်းအရှေ့ပိုင်း မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် တနင်္သာရီတိုင်းတွေမှာ မိုးရရှိဖွယ်ရှိပြီး မေလ ၁၅ရက်နေ့မှ ၂၁ရက်နေ့အတွင်းမှာတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးမိုးရရှိနိုင်သလို ဧရာဝတီတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း တွေမိုးများနိုင်ပါတယ် မေလ ၂၂ရက်နေ့မှ ဂျွန်လ ၄ရက်နေ့အတွင်း မုတ်သုန်ကြိုမိုးနဲ့ မုတ်သုန်လေစောရရှိနိုင်ပြီး မိုးဦးစောစေနိုင်တယ်လို့ #MME မှ ခန့်မှန်းပေးထားပါတယ်…\_ အပူဒါဏ်ကိုထီးမိုးကာမယ်သိလား အားကိုးလိုက်စမ်းတော့ သူရေ… နွေရာသီ ဧပြီလအထိ သိသာစွာမပူခဲ့ပဲ မေလမှာ ပူပြင်းခြင်းကလည်း ရက်အနည်းငယ်သာရှိပါလိမ့်မယ် … Read more
“အားလုံးထင်သလို မဟုတ်ပါဘူး။ စေတနာကောင်းရင် ကံကောင်းတယ်” ဟု မင်းရာဇာပြော သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာအမှု ပထမဆုံးအကြိမ် ရုံးထုတ်၊ ယောက္ခမဖြစ်သူ အာမခံရ… အသက် မပြည့်သေးတဲ့ အိမ်အကူအမျိုးသမီးငယ် အပေါ် အက်ဆစ်နဲ့ပက်တာ၊ ဓားနဲ့ထိုးတာ၊ တူနဲ့ရိုက်တာ စတဲ့ ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်မှု တွေ လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာ အပါအဝင် ၄ ဦး ကို မေ ၇ ရက်နေ့ (ဒီနေ့မှာ) မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ် တရားရုံးမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ ရုံးချိန်းမှာ သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာရဲ့ ယောက္ခမဖြစ်သူ အငြိမ်းစား ရဲဝန်ထမ်း ဦးမောင်မောင်အေးကို တရားရုံးက ကျပ် ၁၀ သိန်းတန် အာမခံ လျှောက်ထားသူ ၂ … Read more
ခြင်ပြေးစေတဲ့ ရေနွေးကြမ်းအိုးထဲက လက်ဖက်ခြောက် ရေနွေးကြမ်းအိုးထဲက လက်ဖက်ခြောက်ဖတ်တွေ မလွှင့်ပစ်ဘဲ အကျိုးရှိတယ်အောင် ဒီလိုသုံးလို့ရပါတယ် ရေနွေးကြမ်းအိုးထဲက လက်ဖက်ခြောက်ဖတ်တွေ မလွှင့်ပစ်ဘဲ သုံးတတ်ရင် အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား ဈေးက ဝယ်လာတဲ့ ငါးကတော်တော်ညှီတဲ့ ငါးဆိ်ိုရင် လက်ဖက်ခြောက်ဖတ်နဲ့ အတူ ညှီနေတဲ့ငါးကို အိုးတစ်ခုတည်းထည့်ပြုပ်လိုက်ပါ။ ငါးညှီနဲ့ လုံးဝ ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ လက်ဖက်ခြောက်ဖတ်တွေကို ရေအေးနဲ့ရောပြီး မှန်ပြတင်းပေါက် အိမ်သုံးပစည်းနဲ့ ရွှံ့ပေနေတဲ့ ဘွတ်ဖိနပ်တွေကို ဆေးကြောပွတ်တိုက်ပါ။ ပြီးမှ အဝတ်သန့်နဲ့ ပြန်သုတ်လိုက်ပါ။ သန့်ပြီးတောက်ပြောင်သွားပါလိမ့်မယ်။ လဖက်ခြောက်ဖတ်တွေကို ရေအေးနဲ့ ရောစပ်ပြီး မြေသြဇာရည်အဖြစ် အပင်တွေကို လောင်းပေးနိုင်ရင် သဘာဝ မြေသြဇာကို ရရှိစေပြီး အပင်တွေကို သန်စွမ်း ကျန်းမာစေပါတယ်။ လဖက်ခြောက်ဖတ်တွေကို အခြောက်လှမ်းပြီး ကြက်ဥနဲ့ ပြုပ်စားရင် မွှေးကြိ်ိုင်ပြီး အရသာ ရှိလှပါတယ်။ … Read more
မိနျးကလေးတိုငျး ဘဝမှာ တဈခါလောကျတော့ လုပျကွညျ့သငျ့တဲ့ အရာမြား ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်နေကျ နိစ္စဓူဝကိစ္စတွေကနေ ခွဲထွက်ပြီး မတူညီတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတခုကို တခါတရံလောက်ဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းလဲနေထိုင်လိုက်ကြည့်ခြင်းဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအတွက် အတော်လေး အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ ကိစ္စတခုပါပဲ ပျိုမေတို့ရေ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ပျိုမေတိုင်းရဲ့ ဘဝမှာ တခါလောက်တော့ အနည်းဆုံးဖြစ်ဖြစ် လုပ်ကြည့်သင့်တဲ့ အရာလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ (၁) တယောက်တည်းခရီးတွေ ထွက်ပါ မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ တယောက်တည်းခရီးသွားဖို့ဆိုတာဟာ အနည်းငယ်စွန့်စားရတဲ့ ကိစ္စတခုဆိုပေမယ့် တယောက်တည်းခရီးသွားခြင်းကနေ ထင်မထားလောက်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်တာကြောင့် လုံခြုံဘေးကင်းမယ်လို့ ထင်ရတဲ့ နေရာဒေသတခုခုကို တယောက်တည်း ခရီးသွားဖို့ပြင်ဆင်ပြုလုပ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ (၂) တရက်လောက် ဖုန်းမသုံးဘဲ အချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းကြည့်ပါ စိတ်ဝင်စားစရာတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကို ဖြတ်ပြီး ဖုန်းအသုံးမပြုဘဲ နေကြည့်ဖို့ဆိုတာဟာ လွယ်တဲ့ကိစ္စတခုတော့ မဟုတ်ပေမယ့် … Read more
အိမ်အကူအမျိုးသမီးကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဖြင့် တရားစွဲခံရတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာတို့လင်မယား ကိုမြောက်ဥက္ကလာတရားရုံးမှာယနေ့စတင်တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ မြင်ကွင်းများ …
အိမ်အကူအမျိုးသမီးကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဖြင့် တရားစွဲခံရတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာတို့လင်မယား ကိုမြောက်ဥက္ကလာတရားရုံးမှာယနေ့စတင်တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ မြင်ကွင်းများ … အိမ်အကူအမျိုးသမီးကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဖြင့် တရားစွဲခံရတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာတို့လင်မယား ကိုမြောက်ဥက္ကလာတရားရုံးမှာယနေ့စတင်တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ မြင်ကွင်းများ … အိမ်အကူအမျိုးသမီးကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဖြင့် တရားစွဲခံရတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာတို့လင်မယား ကိုမြောက်ဥက္ကလာတရားရုံးမှာယနေ့စတင်တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ မြင်ကွင်းများ …1 အိမ်အကူအမျိုးသမီးကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဖြင့် တရားစွဲခံရတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာတို့လင်မယား ကိုမြောက်ဥက္ကလာတရားရုံးမှာယနေ့စတင်တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ မြင်ကွင်းများ …2 အိမ်အကူအမျိုးသမီးကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဖြင့် တရားစွဲခံရတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာတို့လင်မယား ကိုမြောက်ဥက္ကလာတရားရုံးမှာယနေ့စတင်တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ မြင်ကွင်းများ …3 အိမ်အကူအမျိုးသမီးကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဖြင့် တရားစွဲခံရတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာတို့လင်မယား ကိုမြောက်ဥက္ကလာတရားရုံးမှာယနေ့စတင်တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ မြင်ကွင်းများ …4 Credit. #CeleGabar Photo KaungSat ————————- unicode အိမျအကူအမြိုးသမီးကို ညှငျးပနျးနှိပျစကျမှုဖွငျ့ တရားစှဲခံရတဲ့ သရုပျဆောငျမငျးရာဇာတို့လငျမယား ကိုမွောကျဥက်ကလာတရားရုံးမှာယနစေ့တငျတရားစှဲဆိုခဲ့တဲ့ မွငျကှငျးမြား … … Read more
ကိုဗစ်ကာလမှာ ရိုးရိုးရောဂါနဲ့သေတဲ့လူနာကို သံသယလူနာလို့ သတ်မှတ်ပြီး အခေါင်းဖိုး သိန်းချီတောင်းနေတဲ့ရန်ကုန်စည်ပင်
ကိုဗစ်ကာလမှာ ရိုးရိုးရောဂါနဲ့သေတဲ့လူနာကို သံသယလူနာလို့ သတ်မှတ်ပြီး အခေါင်းဖိုး သိန်းချီတောင်းနေတဲ့ရန်ကုန်စည်ပင် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး တွင် ကွယ်လွန်သူအချို့၏ မိသားစုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်အခက်အခဲ အား ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူများ နှင့် ​ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် သိရှိ ၍ စည်းကမ်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်။ ယခု ကဲ့ သို့ ကိုဗစ် ကပ်ရောဂါ ကာလတွင်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး တွင် ကွယ်လွန်သွားသော လူနာများ ကို ကိုဗစ် သံသယ ဟု သတ်မှတ်လိုက်ပါ က နားရေးကူညီမှု အသင်း နှင့် လူမှုရေးအဖွဲ့တို့ မှ Dead Body အား အကူအညီပေးခွင့်မရှိဘဲ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာန အောက်ရှိ ထိန်ပင်သုတ်ဿာန် မှ နိဗ္ဗာန် ယာဉ်ဖြင့်သာ သယ်ယူခွင့် ရှိပါသည်။ … Read more